> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ
Enwere m ike Naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ?
M nwere Toshiba Win7 laptọọpụ. A ụbọchị ole na ole gara aga, m depụtaghachiri ụfọdụ faịlụ (foto, akwụkwọ na videos) si enyi m si mpụga ike mbanye m laptọọpụ. Nke a Monday M mmadụ na mberede ehichapụ ndị a faịlụ site na m na laptọọpụ na bupụrụ ihe egweri biini. Bụ n'ebe ọ bụla ngwọta na m nwere ike gbapụta ha si m na laptọọpụ? Biko nyere m aka.
Jiri ya nwayọọ! Mberede nhichapụ bụ otu n'ime ndị nkịtị ọnọdụ nke data ọnwụ. Gị ehichapụ faịlụ na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data na gị na laptọọpụ tupu ọhụrụ data na-edochi ha. Ọ ga-abụ a dịghị nnukwu ihe naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ ọ bụrụ na ị kwụsị iji gị na laptọọpụ ozugbo na-eji a kwesịrị ekwesị laptọọpụ data mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ otu nke kasị mma omume na ị nwere ike nweta iji weghachite ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ma Windows laptọọpụ na Mac akwụkwọ. Ọ bụ ike iji weghachite a dịgasị iche iche nke ehichapụ faịlụ site na gị na laptọọpụ, gụnyere videos, photos, ọdịyo faịlụ, ozi ịntanetị, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ugbu a ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery n'okpuru. The ikpe mbipute-enye gị ohere ike iṅomi gị na laptọọpụ si ike mbanye anya n'ihi na ehichapụ faịlụ.
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ? Ị na mkpa 3 Nzọụkwụ
Ugbu a ka na-Windows version nke Wondershare Data Recovery dị ka ihe atụ. Mac ọrụ pụrụ ịgbaso yiri arụmọrụ naghachi ehichapụ faịlụ site Mac akwụkwọ na Mac version.
Mgbe launching Wondershare Data Recovery na gị Windows laptọọpụ, ị ga mkpa iji họrọ a mgbake mode iji malite usoro.
Naghachi ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi gị na laptọọpụ si nkebi maka furu efu faịlụ
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga ịchọpụta na-egosi partitions na gị laptọọpụ. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ onye ị chọrọ naghachi faịlụ site na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 weghachite ehichapụ faịlụ site na laptọọpụ
The hụrụ ọdịnaya ga-hụrụ na gosiri na "faịlụ ụdị" na "ụzọ" mgbe scanning. Ị nwere ike ịlele otú ọtụtụ faịlụ i nwere ike weghachite na mmemme window. I nwekwara ike ihuchalu hụrụ oyiyi kwa.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" zọpụta ha na gị na laptọọpụ.